PVC yemahara furo bhodhi Vagadziri & Vatengesi - China PVC yemahara furo bhodhi Fekitori
4mm epurasitiki PVC pepa
PVC yemahara furo bhodhi imhando yePVC furo bhodhi. Sekureva kwekugadzira, PVC furo bhodhi inogona kukamurwa kuita PVC crust furo bhodhi uye PVC yemahara furo bhodhi. PVC furo bhodhi inozivikanwawo seSchaeffer bhodhi uye andI bhodhi. Makemikari ayo ari PVC.
3mm PVC furo bhodhi
Zvinoenderana nehunyanzvi hwazvino, isu tinogona kupa 1-30mm PVC furo bhodhi. Pakati pavo, 3mm PVC furo bhodhi inozivikanwa kwazvo. Vatengi vanowanzoishandisa kupurinda nekugadzira ekushambadzira mabhodhi.
UV yakadhindwa foamboard 2mm
UV yakadhindwa foamboard 2mm imhando yePVC yemahara furo bhodhi, uye ese ari ePVC furo jira. PVC furo bhodhi inogona kukamurwa kuita PVC celuka furo bhodhi uye PVC yemahara furo bhodhi zvinoenderana neyakagadzirwa maitiro.
1mm PVC yemahara furo jira ine maseru maseru uye akatsetseka pamusoro pekunze inoita chisarudzo chakanakira mahunyanzvi ekudhinda uye emabhiribhodhi vanogadzira uye zvakare yakakosha zvinhu zvekushongedza kwekushongedza. PVC furo bhodhi pepa rave richishandiswa zvakanyanya kune zviratidzo, zvikwangwani, zvinoratidzwa uye nezvimwe.